Arbaco, Luulyo, 14, 2021 (Wararka-Maanta) – Gabadh lagu magacaabi jiray Hinda Cumar, ayaa inta la kufsaday kadibna lagu dilay magaalada Hargaysa, sida ay eheladeedu sheegeen.Qoyska Hinda ayaa falkan ku eedeynaya mid kamida wadayaasha basas ka iyo kirishboy giisa.
“8:40 PM ayaa bas huruuda oo laba nin saaranyihiin aansaaray, 9:00 PM waxa laygu yidhi inanti waa mayd” Hinda dumashideed ayaa sida Bulsho TV u sheegtay.
“Sidaas ayay inantii ku geeriyootay iyadoo kufsi iyo dil loogaystay” ayay hadalkeeda ku dartay.
“Dhakhtar ku wuxuu yidhi waxay u dhimatay kufsi iyo dil” ayay tidhi.
Wararka Maanta : Haweeney Macalin Dugsi Qur'aan oo qabay caawa ku sumeysay Beledweyne -...
Wararka Somali13 mins ago